မိုးကောင်းကင်: မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆွမ်းလောင်းအသင်း ဇွန်လ ဆွမ်းအလှူရှင်များစာရင်း။
မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆွမ်းလောင်းအသင်း ဇွန်လ ဆွမ်းအလှူရှင်များစာရင်း။
ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ဦးစိန်လှိုင် (၁၄နှစ်ပြည့်)အားရည်စူး၍ ကိုအောင်ကိုကိုထိုက်+မပြည့်ပြည့်ဖြိုး(ကျိုက်လတ်မြို့) (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)
ရာသက်ပန်ဆွမ်းပဒေသာပင် အလှူရှင်များအဖွဲ့ (နေ့ဆွမ်းအလှူ)
ကိုကျော်ဇင်မောင်+မလှမြတ်သူ၊သား-အောင်ထက်ဦး (စင်္ကာပူ)မှ သား-အောင်ထက်ဦး ၏ (၇)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ။ (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)
မသင်းလဲ့ရီမောင်(စင်္ကာပူ)မှ ကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီး (၂)နှစ်ပြည့်အလှူ ။
ဦးလှဘုန်းမြင့် + မချိုမော်ဟန်၊ သမီး- သဲသက်ဇွန်၊စိမ့်နှင်းမွန် မိသားစု(ဘန်ကောက်)မှ
မချိုမော်ဟန် ၏ မွေးနေ့အလှူ
ကိုသက်မြင့်ဦး+မကေသီလွင်၊သမီး-လွင်မာမင်း မိသားစု(စင်္ကာပူ) (အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ) ရာသက်ပန်ဆွမ်းပဒေသာပင် အလှူရှင်များအဖွဲ့ (နေ့ဆွမ်းအလှူ)
ကွယ်လွန်သူဖခင်ဦးတင်အောင်နှင့် မိခင် ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ရီတို့အား ရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူမိသားစု(ထိုင်းနိုင်ငံ)၏ အလှူ။ (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)
လမင်းအိမ်စာပေနှင့် ဓမ္မမိတ်ဆွေများ (မူဆယ်မြို့) (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)
မငယ်ငယ်ရှိန်(USA)၏ မွေးနေ့အလှူ (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)
ကိုရန်နိုင်+မသီတာ(စင်္ကာပူ)တို့မှ မသီတာ၏ မွေးနေ့အလှူ။ (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)
ကိုအောင်ဝင်းထွဋ် မိသားစု (စင်္ကာပူ) (Ko NA)
နှစ်ဖက်မိဘများကို အမှူးထား၍ ဦးအောင်မြတ်ကျော်+ဒေါ်ခင်ဆွေမြင့်မိသားစု(ရန်ကုန်)၏အလှူ (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)
၆.(၁၂.၇.၂၀၁၂)ကြာသပတေးနေ့ကွယ်လွန်သူဖခင်ဦးတင်အောင်နှင့် မိခင် ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ရီတို့အား ရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူမိသားစု(ထိုင်းနိုင်ငံ)၏ အလှူ။ (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)
ကိုဇော်ဝင်းထွဋ်+မနှင်းယုယုဝင်း၊သမီးလေး-အေးချမ်းပွင့်ဖြူ မိသားစု(စင်္ကာပူ)မှ သမီးလေး-အေးချမ်းပွင့်ဖြူ ၏မွေးနေ့အလှူ။ (အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ) (ကြာဆံချက်အလှူ)
ကိုဇင်အောင်(စင်္ကာပူ)၏ မွေးနေ့အလှူ။ (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)
ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါးဖြစ်သော ဦးတင်ထွဋ်+ဒေါ်သန်းညွန့်တို့အား ရည်စူး၍
မြေး-စုထက်အောင်၊ဖြူထက်အောင် မိသားစု၏ အလှူ။
ကိုမင်းကျော်သူ+မစုစုလှိုင်မြင့် ၊သမီးလေး-မြတ်သဒ္ဓါသူ မိသားစု(စင်္ကာပူ)
ကိုရန်နိုင်ဝင်း (ဂျပန်) ၏ မွေးနေ့အလှူ (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)
ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးအား ရည်စူး၍ ဒေါ်နန်းခမ်းထွန်း မိသားစု(ဂျပန်)၏ အလှူ။ (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)
ဦးအောင်ဌေး+ဒေါ်မြတ်နွယ် ၊သမီး- မမြတ်မျိုးအောင် မိသားစု(စင်္ကာပူ) (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)
ကိုအောင်သက်လင်း+မယဉ်ယဉ်နု(စင်္ကာပူ)မှ မယဉ်ယဉ်နု ၏မွေးနေ့အလှူ။ (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)
Dr.မိုးကိုဦး+ မ၀င်းမင်းသစ် (ဘန်ကောက်) (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)
မွေးနေ့အလှူရှင်များ ၊အမှတ်တရ အလှူရှင်များရှိပါက အလှူရှင်များ၏ အလှူရက်များကို ဦးစားပေး ဆွမ်းများဆက်ကပ် လောင်းလှူစေပြီး အလှူရှင်မရှိသော တနလာင်္ဆွမ်းပတ်တိုင်းတွင် ရာသက်ပန် ဆွမ်းပဒေသာပင် အလှူငွေများဖြင့် ပျက်ကွက်မှုမရှိအောင် ဆွမ်းများဆက်ကပ် ၊လောင်းလှူပေးလျှက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။
အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ ဆွမ်းရက်တစ်ရက်အတွက် ကျသင့်အလှူငွေမှာ (၁၆၀၀၀၀ ကျပ်) ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5. ကိုဇော်မြင့် (မန္တလေး)
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 1:12 PM
tramadol online no prescription tramadol online visa - tramadol abuse